Ukuphuculwa kokuKhangela okuhlawulelweyo: Umzekelo woKhenketho noKhenketho | Martech Zone
Ukuphuculwa kokuKhangela okuhlawulelweyo: Umzekelo woKhenketho noKhenketho
NgoLwesihlanu, Agasti 28, 2015 Douglas Karr
Ukuba ufuna uncedo okanye ubuchwephesha bokukhangela obuhlawulelweyo, uncedo olukhulu olukhoyo Iqhawe lePCP, upapasho olukhulu apho ukuThengiswa kweHanapin kwabelana ngobuchule babo. Kutshanje uHanapin ukhuphe le infographic emnandi, Iingcebiso eziPhezulu ze-PPC ezilishumi zeMarket yoKhenketho. Ngelixa imeko yokusetyenziswa kukuhamba kunye nokhenketho, ezi ngcebiso zilungele nakuphi na ukuthengisa okufuna ukubandakanya indlela yokusebenza yokukhangela ehlawulelweyo kwiindlela zabo zePPC (Hlawula ngokokuCofa).
Ngama-65% abahambi bokuzonwabisa kunye ne-69% yabahambi beshishini abathi babuyela kwiwebhu ukuze bathathe isigqibo sokuba bafuna ukuya phi okanye phi, ukuthengisa kweHanapin bacinga ukuba i-infographic entle eneengcebiso ezinokubakho iya kuba sisibonelelo esikhulu kunye nesikhokelo sabo bonke uhambo nokhenketho Abathengisi.
Nazi iingcebiso eziphezulu zokuKhangela ukuKhangela eziHlawulwayo
Zahlula - Yenza uphando kwifayile yakho Amaphulo e-PPC okhuphisana nawo kwaye yahlule imikhankaso yakho yentengiso.
Imikhankaso eyahlukileyo -Zeziphi iindawo abaphulaphuli bakho abanokufuna ngazo? Bonelela ngemikhankaso emininzi yokuvavanya kunye nokutshintsha iminikelo yakho.
Ujoliso lweGeo -Chaza indawo kwimimandla esebenzayo, kungenjalo uchitha uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa olukhokhelwayo.
Ekujoliswe kuko ngemini nangeyure -Ukuqinisekisa ukuba iminikelo yakho iyabonakala xa amathemba ejonge kubo anokuba nokwanda okuphezulu kumaxabiso onqakrazo-ukuguqulwa.
Lungiselela i-ROI -Ukufumana ukugcwala kwabantu abaninzi kunokuba kuhle kodwa akuhlawuli amatyala. Hlalutya kwaye ujolise kumaphulo aqhuba ingeniso, hayi nje ukugcwala.
Iindlela zokubhida -Yila amaqhinga okubhida ngokusekwe kwiinjongo zephulo lakho. Ukwazisa, ukwabelana, ukugcwala kunye nokuguqula zizinto eziphambili, kodwa ukuchitha ngaphezulu kuguquko kunengqondo ngakumbi kunokuthenga ukugcwala ngebhidi ephezulu kakhulu.
Nokwandisa iMikhankaso yokuBonisa -Bek'esweni ukubekwa kweentengiso kunye nokwandisa indawo yokujonga endaweni yokusebenzisa ubungakanani obulinganayo bonke ubuchule.
Ukumaketha kwakhona Isicwangciso ngasinye se-PPC kufuneka sibe nesicwangciso sokumaketha kwakhona! Ukujolisa kwiindwendwe ebezikwisiza sakho kwaye zishiye ziya kuthi ngokuqinisekileyo konyusa amazinga okuguqulwa.
Sebenzisa iBing -I-69% yabakhenkethi abaya kwiwebhu ukulungiselela amalungiselelo ohambo kwaye i-71% yezithuthi kwi-Bing ikhethekileyo kwi-Bing (hayi kuGoogle).
Nokwandisa amaPhepha okufika -Amaphepha amakhulu okufika awanyusi nje ukuguqula, zikwabangela amanqaku aphezulu akumgangatho ophucula ukubekwa kwakho kwintengiso. Lungiselela amaphepha akho okufika!
tags: Ukuthengisa hanapinukukhangela okuhlawulelweyoukuthengisa okuhlawulelwayo okuhlawulelweyoHlawula ngokucofa kanyeerbhatubePPCIntengiso ye-ppcepcheroyokukhangela injiniukhenkethohamba
I-Viraltag: Fumanisa, uququzelele, uKhawuleze, uKwabelana kunye nokuKhangela imifanekiso kwi-Intanethi
LeadSift: Faka iiNjongo kunye nokuqonda okunokuSebenza ngeMithombo yeendaba yeNtlalontle